Wood Plastic WPC igwe osisi plastic igwe - China Qingdao Hegu Wood-Plastic
Description of WPC ngwaahịa.
Description of wpc ngwaahịa:
WPC profaịlụ ígwè / WPC igwe extruder / osisi plastic mejupụtara igwe
WPC igwe / osisi plastic mejupụtara igwe / wpc mgbidi panel extrusion akara
WPC mmepụta akara na conical abụọ ịghasa extruder
Production eruba osisi plastic WPC decking igwe
1, na-akwadebe ihe onwunwe:
osisi powder ihe: 80-100mesh osisi ntụ ntụ, ya nwere ike si na osisi sawdust, osikapa husk, osikapa ahịhịa, wheat husk na okporo-ọka, owu staw na agriculture wastage. igwe mkpa bụ osisi ngwepịa na pulverizer igwe
plastic ihe: recycled eyi / Pee plastic mgbe ịsa na ndinuak n'ime flakes. igwe mkpa bụ plastic ịsa na ndinuak akara.
2, WPC ihe Ịgwakọta na granulating
Ịgwakọta:-etinye ndị niile ihe onwunwe n'ime Ịgwakọta igwe, dị ka eyi / Pee recycled flakes, osisi ntụ ntụ, chemical nwekwara
Granulating: ọ dị mkpa iji a elu àgwà granulating igwe mee WPC nsogbu dị iche iche, mmiri exhuasting usoro dị mkpa maka granulating usoro.
3, WPC ngwaahịa extrusion-ịkpụzi-elu ọgwụgwọ
Extrusion na ịkpụzi: anyị conical abụọ ịghasa extruder na-akpan mere maka elu àgwà WPC ngwaahịa extrusion, ọ pụrụ ime ka WPC ihe n'ụzọ zuru ezu mbuaha na gbazee na edo, itinye ezi deisgned ebu na mmezi, online ọnwụ ngwaọrụ, anyị Wood plastic WPC profaịlụ igwe nwere ike ime ezi WPC ngwaahịa, dị ka decking prodfiles, n'ogige profaịlụ, oche profaịlụ, pergoza profaịlụ, igwe ndobe usoro profaịlụ.
N'elu omume: sanding, na-eleghara na embossing usoro nwere ike ime ka WPC ngwaahịa na ọdịdị osisi ọka nke na-ọma nabatara ahịa.
A mix nke eke osisi na plastic eriri Nleta osisi-plastic composites. Ndị a enyere na mbenata n'ozuzu arọ nke a ụgbọala, na n'aka, ọ enhances ya mmanụ ụgbọala arụmọrụ. Wood plastic composites bụ a ala-ọnụ na eco-enyi na enyi-eji dochie anya ka plastic na ígwè mmiri na-ewu ngwa. N'ihi ya, ha chọrọ bụ mgbe niile na-eto eto na ahịa.
The osisi-plastic composites ahịa na-segmented site na ụdị: polyethylene (Pee), polypropylene (eyi), Polyvinyl chloride (ịkwanyere) na ndị ọzọ. Polyethylene dabeere osisi plastic composites-achịkwa ụlọ ọrụ. The ụlọ & ewu ngwaahịa nke na-ahuta ka ndị kasị ibu n'ji nke polyethylene na Polyvinyl chloride osisi-plastic composites. The akpakanamde mmiri nke na-abịa na-esote ebe osisi-plastic composites na-eji ke Ndinam nke fechaa akpakanamde mmiri
Dabere na ha ngwa, a ahịa e segmented n'ime ụlọ & ewu na ngwaahịa, decking, fencing, ulo oru & n'ji ngwongwo, akpakanamde mmiri, na ndị ọzọ. Otu n'ime ndị a, ụlọ ahụ ma na-ewu nke pụtara dị ka ndị kasị ibu na ndị zuru ụwa ọnụ osisi-plastic composites ahịa.
Previous: Wood Plastic WPC igwe WPC decking co-extrusion akara
Next: Wood Plastic WPC igwe wpc ụzọ igwe
Wpc igwekota Machine
Factory wholesale Pu,Pe,Pvc,Eva,Tpr,Nylon Tie,E...